यात्रु र चालकको साझा प्रश्न : गाडीमा पिसाब लागे कहाँ जाने ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ १९, २०७६ बिहिबार १९:३९:५६ | भाेजेन्द्र बस्नेत
काठमाण्डाै - धरानकी बिनिसा लिम्बू बीपी राजमार्ग हुँदै सार्वजनिक बसमा काठमाण्डौ आउँदै हुनुहुन्थ्यो । झण्डै ९ घण्टाको यात्रामा बस तीनपटक रोकियोे । एक पटक खाना र दुई पटक खाजा खान ।
सार्वजनिक बसमा कञ्चनपुरबाट काँकडभिट्टा पुगेर फर्किएकी भीमदत्त नगरपालिकाकी राधा चापागाईंको भोगाइ पनि उस्तै छ । उमेरले पाँच दशक नाघिसकेकी चापागाईंलाई पनि बाटोमा पिसाबले च्यापेर दिनुसम्मको पिर दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘पिसाब चाँडो/चाँडो आउँछ । खाने ठाउँमा रोक्दा त शौचालय थियो, जंगलमा रोक्दा त आफू हिँड्न नसक्ने, अलि पर जान सकिनँ, छेउमा कसरी बस्नु र ? सबै त्यतै थिए, कति दुःख पाइयो/पाइयो ।’
उहाँले अघिल्लो पटकको यात्रा अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो ‘अस्तिको पालि त महिनावारी भएको बेला यति धेरै बिजोग भयो कि, बाटोमा प्याड फर्ने ठाउँ छैन, ब्लिडिङ भैरहेको छ, यस्तो पीडा त के भन्नु र कम्तीमा राजमार्गका दुई/चार ठाउँमा प्याड फेर्न र फ्याँक्न मिल्ने खालका शौचालय बनाइदिए हुने हुने नि ।’
सामान्यतया: राजमार्गमा हरेक ३५/४० किलोमिटरको फरकमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ । तर मान्छेको ज्यानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ट्राफिक नियमको त बेवास्ता हुने ठाउँमा दिसापिसाबको समस्या प्राथमिकतामा परेकै छैन । राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा नहुँदा दिसापिसाब च्यापेरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यात्रु पिसाबले च्यापेर कराइरहँदा पनि चालक नसुनेझैँ गरी गाडी कुदाइ रहन्छन् ।
यात्रुले पिसाब आयो भनेर कराउँदा पनि भनेको ठाउँमा गाडी रोक्न नसक्नु आफूहरुको पनि बाध्यता रहेको चालकहरु बताउँछन् । काँकडभिट्टा–महेन्द्रनगर बस चलाउने चालक निरञ्जन उराउ भन्नुहुन्छ, ‘बाटोमा शौचालय नै छैन, कहाँ रोक्नु र ? कतिपय ठाउँमा जंगल पनि आउँदैन, बस्तीमा रोक्न मिलेन । यात्रुको पीडा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ । तर रोक्न नमिल्ने भएकोले चुपचाप गाडी चलाउनुपर्छ । हामी आफू पनि धेरैपटक पिसाब च्यापेरै गाडी चलाइरहेका हुन्छौं ।’
त्यसैले पाखा जंगलमा रोक्न पनि डर हुन्छ । तर चाहिने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय नै छैन त कहाँ रोक्नु ? फोहोर हुन्छ भन्ने त हामीलाई पनि थाहा छ, तर बाध्यताले रोक्नुपरेको हो । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा बाटोमा यात्रा गर्नेलाई पनि दिसापिसाब आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हैन र ?’
दैनिक हजारौं यात्रुले समस्या भोगिरहेका छन् । मिर्गौला, पिसाबथैलीमा संक्रमणकाे समस्या भएका यात्रुले दिसापिसाब लागेपछि लामो समय रोक्न सक्दैनन् । पिसाब लाग्नेबित्तिकै गर्न पाएनन् भने संक्रमण बढेर उनीहरुको ज्यानै जोखिम हुन्छ ।
सडकको अवस्था अनुसार ३५/४० किलोमिटरको फरकमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्छ । शुल्क लिएरै भए पनि शौचालय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । एउटा यात्रामा २०/३० रुपैयाँ तिर्नु पिसाब रोक्नुभन्दा सजिलो हो । यो काम सम्बन्धित पालिकाहरुले नै गर्नुपर्छ । यो गर्नै नसक्ने र बेकामे काम होइन ।